မကြေးစည်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာအားပေးမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့ သူမကတော့ ကနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း ပရိသတ်တွေအမောပြေစေရန်တင်ပေးလိုက်တဲ့ မေမီကိုကို – Nyi Ma Lay
မကြေးစည်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာအားပေးမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့ သူမကတော့ ကနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း ပရိသတ်တွေအမောပြေစေရန်တင်ပေးလိုက်တဲ့ မေမီကိုကို
MRTV-4 မင်းသမီး လေး မေမီကိုကို ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေ များစွာ ရိုက်ကူး ထားပြီး ပရိသတ် တွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြု အားပေး ချစ်ခင်မှု တွေကို အခိုင်အမာ ရရှိထား သူလေးမို့ အထူးတလည် မိတ်ဆက် ပေးစရာ မလိုတော့ ပါဘူးနော်..။ ချစ်စရာ ကောင်းသလို သရုပ်ဆောင်လည်း‌ေကာင်းတာမို့ ပရိသတ်တွေ အားပေး ချစ်ခင် ကြတဲ့ မေမီလေး ကတော့ ချစ်သူလေး နဲ့ အချစ်ရေးမှ ာအဆင်ပြေ နေလို့ လူတိုင်းက အားကျ နေရတဲ့ မင်းသမီးလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်.
ချစ်စရာ အပြုံလေး တွေနဲ့ မြင်သူတိုင်းကို စွဲဆောင် နိုင်သူလေး ဖြစ်နေ တဲ့ မေမီကိုကို ကတော့ အရမ်းကို အချစ်ခံ နေရ သူလေး ဖြစ်ပါ တယ်နော်.. သူမ ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လည်းနွဲ့ဆိုးဆိုး တတ်သူလေး ဖြစ်နေတယ် လို့လည်း သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့ အင်တာဗျုးမှာ ဖြေပေး ပါသေး တယ်နော်.. မကြာခင်က MRTV-4 မှာ ပြန်လွှင့် နေတဲ့ ပျားရည်အိုင် ဇာတ်လမ်း ထဲမှာ တော့ မကြေးစည် ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်း ကြောင့် သူမရဲ့ ပရိတ်တွေ က ပိုမို များပြား ခဲ့ပါတယ်နော်. ..
သူမ ကတော့ ဒီနေ့ လေးမှာ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်ကြီး သဘောကျ သွားစေမဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ဆော့ထားတဲ့ Tiktok လေးကို တင်ပေး လာတာ ဖြစ်ပါ တယ်နော်..ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ရာ စကားလေး တစ်ခွန်းလောက် နဲ့ အားပေး စကားလေး ပြောပေး ကြပါအုံးနော်…
MRTV-4 မင္းသမီး ေလး ေမမီကိုကို ကေတာ့ ဇာတ္လမ္းတြဲ ေတြ မ်ားစြာ ရိုက္ကူး ထားၿပီး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အသိအမွတ္ျပဳ အားေပး ခ်စ္ခင္မႈ ေတြကို အခိုင္အမာ ရရွိထား သူေလးမို႔ အထူးတလည္ မိတ္ဆက္ ေပးစရာ မလိုေတာ့ ပါဘူးေနာ္..။ ခ်စ္စရာ ေကာင္းသလို သ႐ုပ္ေဆာင္လည္း‌ေကာင္းတာမို႔ ပရိသတ္ေတြ အားေပး ခ်စ္ခင္ ၾကတဲ့ ေမမီေလး ကေတာ့ ခ်စ္သူေလး နဲ႔ အခ်စ္ေရးမွ ာအဆင္ေၿပ ေနလို႔ လူတိုင္းက အားက် ေနရတဲ့ မင္းသမီးေလး ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.
ခ်စ္စရာ အျပဳံေလး ေတြနဲ႔ ျမင္သူတိုင္းကို စြဲေဆာင္ နိုင္သူေလး ျဖစ္ေန တဲ့ ေမမီကိုကို ကေတာ့ အရမ္းကို အခ်စ္ခံ ေနရ သူေလး ျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္.. သူမ ကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ လည္းႏြဲ႕ဆိုးဆိုး တတ္သူေလး ျဖစ္ေနတယ္ လို႔လည္း သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူနဲ႔ အင္တာဗ်ဳးမွာ ေျဖေပး ပါေသး တယ္ေနာ္.. မၾကာခင္က MRTV-4 မွာ ျပန္လႊင့္ ေနတဲ့ ပ်ားရည္အိုင္ ဇာတ္လမ္း ထဲမွာ ေတာ့ မေၾကးစည္ ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္း ေၾကာင့္ သူမရဲ့ ပရိတ္ေတြ က ပိုမို မ်ားျပား ခဲ့ပါတယ္ေနာ္. ..
သူမ ကေတာ့ ဒီေန႔ ေလးမွာ ခ်စ္ရတဲ့ ပရိသတ္ႀကီး သေဘာက် သြားေစမဲ့ ပုံစံေလးနဲ႔ ေဆာ့ထားတဲ့ Tiktok ေလးကို တင္ေပး လာတာ ျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္..ခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တဲ့ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ခ်စ္ရာ စကားေလး တစ္ခြန္းေလာက္ နဲ႔ အားေပး စကားေလး ေျပာေပး ၾကပါအုံးေနာ္…
Previous post သူမရဲ့ချစ်သူအသစ်လေးနဲ့ လက်တွဲလာခဲ့တာ (၄)နှစ်ကျော်မှ ပရိသတ်တွေကို တရားဝင်အသိပေးလိုက်တဲ့ သုသု
Next post ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သူမရဲ့ မိခင်ကြီး (၈)လပြည့်မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ် အလှူဒါနလေးတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ တင်ဇာမော်